Imtixaanka Keyboard-ka tooska ah
Qeexitaanka sax ah ee furayaasha, isticmaal qaabeynta keyboard-ka Ingiriisiga!
Si aad u tijaabiso furaha, riix furayaasha (ka dib markii aad u rogtay qaabka Ingiriisiga)
- nooca batoonka aad hoos u dhigto
- nooca batoonka, ka dib markaad sii deyso, micnaheedu waa adeeggeeda
Keyboard-ka waa aaladda mashiinka ugu weyn ee macluumaadka lagu galo kombuyutarka ama laptop. Inta lagu gudajiro la shaqaynta qalqaalaha, daqiiqado aan fiicnayn ayaa soo bixi kara markii furayaashu xardhaan, jilayaasha qaldan ee aan riixnay ayaa la soo galay, iyo wixii la mid ah. Si aad u xalliso dhibaatada noocaas ah, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u ogaato halka ay dhibaatadu ka taagan tahay: farsamoyaqaanka aaladda wax soo gelinta ama softiweerka aad ku qortay. Adeeggeenna tijaabada ah ee 'keyboard keyboard', oo ah aaladda ugu weyn ee la shaqeynta qoraalka, ayaa naga caawin doonta tan.
Riix batoonada ku yaal badhankaaga, oo haddii ay si fiican u shaqeeyaan, ka dibna shaashadda korka ee shaashadda u dhigma ayaa lagu soo bandhigi doonaa buluug waqtiga riixaya, ka dibna rinji cad. Haddii badhanku ku dhejiyo, taasoo horseedaysa hawlgallo soo noqnoqda, ka dib waxaa lagu rinjiyeyn doonaa buluug.
Sababta oo ah jiritaanka ilaha internet-keena, isticmaaleyaashu uma baahna inay ku rakibaan barnaamij aan had iyo jeer bilaash ahayn. Tijaabinta ereygaaga kombuyutarkaaga khadka tooska ah ayaa ah habka ugu fudud ee lagu tijaabiyo keyboardkaaga.
Tijaabinta ereygaaga keyboard waa hab fudud laakiin sawir qaadis ah. Si loo baaro dhammaan furayaasha, waqtiga iyo daryeelka ugu badan ayaa loo baahan yahay. Haddii ay dhacdo cilad-darrooyinka la helo baaritaanka ka dib, waxaa habboon in la dayactiro keyboard jaban ama mid cusub la soo iibsado. Haddii, qoraaga qoraalka, furayaasha la tijaabiyey aysan si buuxda u shaqeynin, laakiin ay shaqeeyeen intii lagu jiray imtixaanka, waxay ka dhigan tahay inaad dhibaatooyin ku haysatid kombiyuutarka.
Furaha farsamada gacanta ilaa maanta ayaa ah isha ugu weyn ee macluumaadka laga soo galo. Haddii aad barbardhigto keyboard-ka farsamada iyo taabashada, way ka sii dhib badan tahay inaad ku qorto farriimo wax ku ool ah iyo qoraallo ku saabsan keyboard-ka farsamada.
Si kastaba ha noqotee, makaanikada furaha ma ahan cilado la'aan. Hawsha, keyboard-ka ayaa noqon kara mid aan xasilloonayn: riixitaanno been ah, cadaadisyo laba-jibbaar ah, iyo dhibicyo fure ayaa dhaca.
Haddii aad bilaawday inaad tan ku aragto kumbuyuutarkaaga, markaa waxaad ubaahantahay inaad fiiriso oo aad ogaato in sababta dhabta ah ay kujirto. Hirgelinta tijaabooyinka, adeegeena ayaa naga caawin doona, kaas oo aad hada ugu adeegsan karto qadka tooska ah, adigoo si fudud u riixaya badhamada keyboard-ka. Faa'iidada habkan ayaa ah inaadan u baahnayn inaad soo dejiso barnaamij wax saddexaad ah.